Izinsiza Imininingwane kanye nendima yabo emphakathini wanamuhla
izinsiza Imininingwane ... Ngicabanga ukuthi manje kunzima ukuhlangabezana indoda ongalokothi ekuphileni kwakhe ngeke ebhekene nale umqondo.
Ngemva kokucabangisisa ngokunengqondo, qiniseka ukuba afinyelele isiphetho ukuthi ukuthuthukiswa kunoma yimuphi umphakathi awunakuba khona ngaphandle kokuthethelela khona izinhlobo ezahlukene izinsiza: amandla, amathuluzi, izinto, futhi, ekugcineni, ulwazi.
Siphila esikhathini lingachazwa ngokuthi isinyathelo okungakaze kubonwe okwandisa ukugeleza kolwazi. Lokhu ukukhula Kwenziwa emikhakheni eziningana, phakathi lapho ezithandwa kakhulu zezomnotho nezenhlalo.
Imininingwane ubulokhu ihlala yezimbangela eziyinhloko inquma ukuthuthukiswa ubuchwepheshe kanye nezinsiza jikelele.
Ngaphansi ulwazi, esikhundleni salokho, kufanele asho iqoqo ulwazi mayelana lezinto noma izenzakalo ezisizungezile emhlabeni kwansuku, izakhiwo zawo kanye isimo.
Isahluko 1. izinsiza Imininingwane. Inchazelo
izinsiza Imininingwane zimi imibhalo ejwayelekile futhi imibhalo lomhlangano. Kwakamuva ibekwe obala noma ngasese zomlando, imitapo, izisekelo, iminyuziyamu, depositories, amabhange kanye nedatha elisekela.
Thina, yebo, khumbula ukuthi kuze kube sekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule, zonke izinhlobo ulwazi izinsiza yayimane nje ngokwezinto ezibonakalayo, izinto ngempela eziphathekayo. Ngokwesibonelo, izincwadi kanye nabezindaba kwakungamadodana ezivamile wabo. Manje izikhathi sezishintshile, futhi abaningi bathanda ukugcina ulwazi okuthiwa zobuchwepheshe noma digital.
Ngokuvamile, kufanele kuphawulwe ukuthi inkulumo ethi, okuyinto kulesi sihloko okuxoxwa kuhilela uhlobo indida ngokwesayensi. Yini-ke eyenziwe?
Into wukuthi yize ke ingenye ebaluleke kakhulu lapho sisebenzelana nezindaba ezihlobene umphakathi ulwazi okwamanje akekho uyonika definition eqondile leli qiniso. Futhi uma siphendukela ososayensi incazelo, kungenzeka uthole impendulo, ukuze empeleni ngezinye izikhathi, futhi le ncazelo namanje nje ayakhekanga ngokuphelele.
Khona-ke akucaci ngayiphi indlela samukelwa phakathi ochwepheshe ukwethula ulwazi kanye nedatha. Ngemva ezulazula zingosi elikhulu, ngathola impendulo - ngokusebenzisa kuvisisa uqobo yithuluzi ulwazi, kanye yendima yayo e izinqubo ezihlukahlukene zezenhlalo, ngqo ngokusebenzisa imithetho ushintsho yabo, isizukulwane kanye nokusabalalisa.
Isigaba 2. Electronic Imininingwane imithombo. amakhasimende abo
Kuze kube manje, ukuze umuntu ahlukanise phakathi yekwentiwa Imininingwane imithombo. Umsebenzi libhekisela engxenyeni ukuthi iyatholakala yokusesha okuzenzakalelayo futhi izinqubo zokulondoloza. Lilondolozwe kumakhompyutha endaweni izinhlelo ngokwezifiso yakhelwe futhi mhlawumbe umbhalo nezithombe imibhalo. Eqinisweni, eziningi ulwazi imithombo zingenziwa zitholakale kubasebenzisi kuphela ngesisekelo kwezohwebo.
Uma sikhuluma abahlanganyeli main kule makethe, khona-ke ngokuqinisekile yilezi:
- abasebenzisi (mina nawe);
- Umthengisi Imininingwane (abashicileli, ezitolo ezidayisa izincwadi, abanikazi izinsiza Inthanethi, njll ...);
- abakhiqizi idatha (abalobi, abalobeli bamaphephandaba, izikhulu abaculi kanye abaculi, nabo eyenziwa futhi ulwazi lokuphatha izinsiza).
Kuleli zwe lanamuhla, izindlela ezivame kakhulu kolwazi zokufinyelela kubhekwe Yiqiniso, amanethiwekhi computer, futhi iningi abasebenzisi ukuthola ulwazi inthanethi.
Ngaphezu kwalokho, lokhu emakethe zingahlukaniswa zibe kumasegmenti ezilandelayo:
systems ekhompyutha ngoba komsebenzi;
zolwazi ekubhekaneni nezindaba zezimali;
egciniwe, eyenzelwe ochwepheshe, futhi emakethe mass.
Yolwazi, okuyizinto uhlobo izincwadi virtual, ungakwazi esikhundleni salokho ihlukaniswe emihlanu izinhlobo:
- isofthiwe ezikhethekile;
- tabular futhi ezinombolo;
Futhi ekugcineni, ngangifuna aveze ukuthi kokubili ezweni global ulwazi izinsiza zibaluleke ngokuya kwezomnotho, kanye omunye izinkomba ebaluleke kakhulu umphakathi ulwazi isiko.
Exhibition of imidwebo Serov ku Krymsky Val: izibuyekezo, izithombe
Ubuhle Okokuqala zomhlaba. Imincintiswano "Miss World"
Ingxubevange ye Mane (Krasnoyarsk)
Foil amabhola - izibhamu amapende amathikithi
Vodka "ezibiyele": incazelo kanye nokubuyekeza
Lemon pie - dessert kakhulu